Fahadisoana izay, ary tsy aharitra satria tsy hay ilay asa, no mety tsy ho tiana. Marina fa eo ampanaovana afaka mianatra, sy mety ho tia, fa ankavitsiana no tafita amin'izay.
Mety hieritreritra ihany koa hoe, inona no sera mandeha, na ny étude de marché, mety ho làlana iray izay, fa aleo miainga amin'ny zavatra tiana sy hay hatrany aloha, dia iny zavatra tianao sy hainao iny alalinina. Tsy voatery fahaizana ananana diploma, na ny nianarana tany am-pianarana.
Tsy misy izany diso filière izany, ka hoe nianatra injeniera nefa lasa mpanao serasera. Ny fahaizanao miatrika ny zava-misy no zava-dehibe.
2- Aiza ny vola iaingana, iza no indramana, iza no anampy?
Fanontaniana mipetraka amin'ireo manangana orinasa hatrany io?
Tsy nisy nanana izany ny ankamaroan'ny nanangana orinasa. Aza avy dia bahanana sy kiviana amin'izany aloha ny saina.
Aza mitady zavatra lavitra na sarotra be.
Mahadika azy ny ohabolana malagasy hoe: "Ny herikerika mahatondra-drano", izany hoe aleo mahazo tombony kely nefa mahalafo betsaka, dia ho hitanao fa andeha ny sera nao. Esory alavitra ilay heritreritra hoe sera indray mandeha dia gros lot, dia manonofy mercure blanc sy volamena ary safira amin'ny taonina eo.
3- Ny mpanjifa kendrena
Tsy misy sera ho an'ny rehetra izany, tsy maintsy jerenao iza no mpanjifa tianao hividy na hanjifa ny asanao?
Samihafa be ny karazana mpanjifa, vehivavy, lehilahy, ankizy, olon-dehibe, manan-karena, tsy manam-bola.
Raha ankizy no kendrena, dia na ny hametrahana ny entana aza, dia atao tandrify ny masony ny haavony, atao mora takatry ny tanany, jerena ny anerena ny reniny hividy, tsy mahagaga ireny karazana bonbon sy kilalaon'ankizy ireny no atao eo amin'ny caisse milahatra, satria menatra ny reniny eo raha anala ilay zavatra amidy eny an-tanan'ilay ankizy, nefa vahoaka be no mijery eo.
Famataranandro mitovy, fa ilay misy boite misy nœud papillon, lafo kokoa ary tian'ny manam-bola, ilay anaty sachet kely kosa no heverin'ny tsy manana fa takany.
Raha revivery, sy restaurant, dia mazava, fa izay misy parking en sécurité ary discret no ahazo olona.
Izay ilay mot clé 3 momba ny varotra:
Toerana, Toerana, Toerana.
Fantatry ny mpivarotra amoron-dalana io mot clé io. Ny toerana ivarotana no lehibe indrindra amin'ny varotra.
Raha hivarotra amin'ny fb ohatra, dia mila matanjaka tsara ny groupe asiana azy.
Tsy ny olona no antsoina anantona, fa ianao no manantona ny misy ireo mpanjifa tianao anjifa ny entana na ny service omenao.
Raha any anaty groupe politique no anaovanao pub, dia vao maika tsy ho tian'ny olona izay, satria andeha anjifa resaka politika no diany ao anatin'io groupe io, nefa pub varotra fiara no resahinao ao.
4- Ny ao ambadikin'ny fananganana orinasa
Mila mahazaka fifehezan-tena, satria ianao no patron nao, na ho patron n'ny hafa.
Tsy atory maraina ianao eo, efa matory daholo ny olona vao atory ianao. Ianao no andray karama farany, satria dia aloanao avokoa ny volan'olona rehetra, ny vidin'entana, ny karaman'ny mpiasa, ny hofan-trano, ny jirama, ny hetram-panjakana, izay ianao sy ny vady aman-janakao vao ahazo vola ho anina, raha misy ny ambiny, ny ampaosy aza mety ho loharana.
Raha efa manam-bady, dia mifampiresaha tsara ianareo mivady, fa ny orinasa mety ho anao, fa ny fiantraikany dia zakain'ny vady amanjanakao, mety tsy ho hitany firy ianao, izany vacances izany dia adinoy, tsy misy congé, tsy misy Cnaps, tsy misy Ostie eo ianao, tsy misy vola retraite andrasanao eo.
Mety misy assurance vie na assurance santé azo atao, fa charge avokoa izany. Mety afaka manao gérant salarié ianao, fa IRSA 20% koa izay, 13% Cnaps, 5% Ostie ankoatran'ny (1+1)%, part salarial.
Tsy misy mibaiko kosa ianao, tompon'ny fotoananao manontolo, ary rehefa mandeha ny seranao dia milamina ianao.
Hidirantsika amin'ny manaraka ireo karazana orinasa, société individuelle, SARL, SA, SAS, SCI.
Manaova zavatra tsara sy ara-dalàna hatrany, na iza na iza mpanjifa anao, fa ny produit na service de qualité dia lafonao hatrany.
Tsy ny client no ataonao afa-po, fa ianao ve afa-po amin'ilay asa na zavatra amidinao? Aza mandainga amin'ny tenanao, na anao indro kelin'ny mpandrafitra, rehefa misy kianinao dia aza afenina, fa amboaro tsara.
Rehefa afa-po ianao dia ho afa-po ny client nao.
Esory ao an-tsaina ny toe-tsaina hiankina aman'olona, angataka, sy hitady fanampiana. Raha izay no mbola mibahana ao an-tsainao, dia tsy lalanao ny famoronana orinasa, aleo avy dia manohy mitady asa.
Olona manana toe-tsaina mizaka tena, miharitra ny mafy, ary mampiasa ny fahaizany rehetra ahatafita azy sy ny orinasany no ilaina.
Tsy misakana ny fifampiresahana amin'olona akory izany, ohatra, mifampiraharaha amin'ny tompon'entana, ka afaka 30-60-90j vao mandoa ny vidin'entana.
Aza be sakana hoe, ka izy tsy anome raha tsy efa client ny? Izay ilay esprit mi-démerde mila ananan'ny mpitantana orinasa.